Aluminium Heatsink Die Casting Manufacturer - Custom Heat Sinks - Minghe Casting
Vahaolana famonoana hafanana amin'ny alàlan'ny fanodinana & Cnc Machining
IATF 16949 CUTTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny fizarana HEATSINK
Raha ny tena marina dia tsy karazana angovo ny hafanana fa fomba famindrana angovo fotsiny. Avy amin'ny fomba fijery mikraoskaopy, aorian'ny fiantraikan'ny angovo avy any ivelany ny molekiola ao amin'ny faritra dia afindra avy amin'ny molekiola ao amin'ilay faritra misy angovo avo ho an'ny molekiola ao amin'ny faritra misy angovo ambany. Noho izany, inoana amin'ny ankapobeny fa ny famindrana angovo dia hafanana. Mazava ho azy, ny dingana na endrika hafanana tena lehibe indrindra dia ny famindrana ny hafanana.
Miaraka amin'ny fanatsarana ny herin'ny computing PC, ny olana amin'ny fanjifana herinaratra sy ny fanaparitahana hafanana dia nanjary olana tsy azo ihodivirana. Ny mari-pana miasa amin'ny fitaovana elektronika dia mamaritra ny fiainany sy ny fahamarinan-toerany. Ny fitazonana ny mari-pana miasa ny singa tsirairay ao anatin'ny faritra mety, ankoatry ny fiantohana fa ny mari-pana amin'ny tontolon'ny asa dia ao anatin'ny elanelam-potoana mety, dia tsy maintsy tsaboina koa amin'ny famafana ny hafanana. Indrindra ho an'ny CPU an'ny PC, raha toa ka overclocking ny mpampiasa, hiantohana ny asany miorina, dia tokony hamafana ny hafanana izy io. Amin'ny faritra iray hafa amin'ny famafana ny hafanana, ny fahombiazan'ny fanaparitahana hafanana ataon'ny LED dia misy akony lehibe koa amin'ny ain'ny jiro.
Misy fomba telo lehibe hamindrana ny hafanana: conduction / convection / radiation. Izay radiatera rehetra dia hampiasa ireo fomba fandefasana hafanana telo etsy ambony amin'ny fotoana iray ihany, fa ny fanamafisana dia tsy mitovy. Raiso ohatra ny fanaparitahana ny hafanana CPU. Ny hafanana dia avoakan'ny asan'ny CPU hatrany, ary afindra amin'ny heat sink amin'ny alàlan'ny conduction amin'ny alàlan'ny fototr'ilay heat sink izay mifandray akaiky amin'ny fotony. Avy eo, ny hafanana mahatratra ny filentehan'ny hafanana dia afindra amin'ny fomba hafa toy ny fitsofan'ny mpankafy. Halefa ny hafanana.
Ho an'ny radiator, ny zava-dehibe indrindra dia ny fahafahan'ny fotony mifoka hafanana betsaka araka izay azo atao avy amin'ny CPU ao anatin'ny fotoana fohy, izany hoe ny fahaizana mandray hafanana avy hatrany. Ny metaly manana fitondran-tena avo lenta ihany no afaka mahay. Anisan'izany, ny radiator maty-cast dia nanjary mpitarika tsikelikely amin'ny indostrian'ny radiatera noho ny tombony vidiny sy ny lanjany.
Atambaro izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo fitaovana avo lenta ho an'ny maty ary ny fiheveran'ny ekipan'ny manam-pahaizana momba ny famokarana sy ny injeniera, ary manana ny indostrian'ny fanariana mitovy amin'ny fiasa milentika hafanana ianao. Heat Sink Die Casting avy amin'i Minghe Casting dia natao hihaona amin'ny fenitra mangatsiaka indrindra amin'ny Cooler. To Minghe dia tsy famaritana fotsiny izany; iraka tanterahintsika miaraka amin'ireo singa izay tena marimaritra iraisana, natolotra tamin'ny fotoana ilanao azy ireo.
Mifandraisa amn'ny injenierantsika heatsink anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1. Fampiharana Components Heatsink mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny vahaolana maty ho azy ary ny vahaolana amin'ny milina cnc ho an'ny fampiharana heat sink, anisan'izany fa tsy ferana amin'ny:
Heatsink mandeha amin'ny fiara
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa momba ny hafanana
Minghe dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona manampy ireo mpanamboatra milentika hafanana hamorona singa mekanika mahomby. Rehefa miara-miasa amin'i Minghe ianao dia afaka mahazo ireto tombony manaraka ireto amin'ny fizotrantsika fanariana faty:
Ny asan'ny casting casting an'i Minghe dia misy presse 40 manomboka amin'ny 250 ka hatramin'ny 3000 taonina. Izahay dia mandray ny sasantsasany amin'ireo hazakaza-bidin'ny hafanana mitaky fatra amin'ny haben'ny haben'ny, ny haben'ny ampahany ary ny fahasarotana. Noho ny fahaizanay momba ny injeniera sy ny maodely dia fantatry ny mpanjifanay aminay ho toy ny orinasa afaka mampihena ny fahasarotana amin'ny ampahany izahay ary hahatonga ny fizotran'ny fanamboarana hahomby kokoa.
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma mba hamaritana ny kalitaon'ny hafanana.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, manana ny fahaizany manamboatra ampahany milentika amin'ny hafanana amin'ny habe rehetra isika, manomboka amin'ny hepuhe cpu ka hatramin'ny trano lehibe ho an'ny jiro tarihina.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra famafana hafanana manokana
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny milina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny filatsahan'ny hafanana namboarina.
Cnc milina hafanana hafanana
Fampidinana fandroana hafanana
Milatsaka famaohana amin'ny fasika
4.Ny fahafaha-manamboatra ny famaritana mazava tsara momba ny fitrohana hafanana
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny milina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ny Heat Sink.
Fitaovana fanariana maty ho an'ny filentehana amin'ny hafanana:
Ny fahaizan'ny famitana ny hafanana amin'ny alàlan'ny hafanana:
Fomba fanamboarana hafanana isan-karazany:
Machining amin'ny heat heat cnc ary maty ny fampiharana apetraka:
LED Heatsink / PC CPU Sink heat / Automotive Heatsink / Radiator;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fatana hafanana aluminium
Safidio ny serivisy fanariana heat heat sink amin'ny alimina
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany manapotsitra hafanana aliminioma antsika dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, Royaume-Uni, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikasa fanariana heat heat aluminium anao.